macOS Monterey dia mamela ny AirPlay amin'ny Apple Fitness + | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo zava-baovao ampiharin'ny macOS Monterey dia ny fahefana mankafy ny Apple Fitness + amin'ny Mac anao noho ny AirPlay. Manana izahay fa ity serivisy Apple ity dia tsy misy manerantany fa izay rehetra afaka mankafy azy io izao dia afaka manao azy amin'ny Mac ihany koa.
Ny maodely Mac sasany ihany miaraka amin'ny rafitra fiasa macOS Monterey vaovao no afaka mankafy an'io AirPlay avy amin'ny iPhone na iPad. Aza adino fa ny Mac dia tsy manana fampiharana Fitness ary tsy manana tranokala izy, noho izany ny serivisy fampiofanana Apple dia tsy misy amin'ny Macs.
Ny Mac izay afaka mankafy ity serivisy ity amin'ny alàlan'ny AirPlay dia: MacBook Pro (2018 ary avy eo) MacBook Air (2018 ary avy eo) iMac (2019 ary taty aoriana) iMac Pro (2017) Mac mini (2020 ary taty aoriana) Mac Pro (2019 ). Ny hany maharatsy ny fampiasana Apple Fitness amin'ny AirPlay dia izany Ny metrika amin'ny efijery, ny tahan'ny fo ary ny kaloria may dia tsy aseho amin'ny Mac-nay, saingy mbola afaka jerena amin'ny Apple Watch izy ireo.
Amin'io lafiny io dia azonao atao ny mampiasa ny Apple Fitness amin'ny fampiharana Fitness ao iPhone, iPad, na Apple TV ary ity serivisy ity dia ho feno ampiasao amin'ny Apple Watch, amin'ity tranga ity dia takiana Apple Watch Series 3 na taty aoriana. Manantena izahay i Cupertino hanapa-kevitra ny handefa ity serivisy ity any amin'ny firenena maro kokoa noho ny misy ankehitriny ary any Etazonia, Kanada, Irlanda, Aostralia ary Nouvelle-Zélande ihany no misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » macOS Monterey dia mamela ny AirPlay ao amin'ny Apple Fitness +